U-Annette Ifilimu Enengxube Yomculo Nengqondo - Ukuzijabulisa
Imayelana Nani Ifilimu?
Izinto Ezithokozisayo Okufanele Uzazi
U-Annetteiyifilimu yedrama yomculo eqondiswe nguLeos Carax (ekuqaleni kwakhe ngolimi lwesiNgisi) ngo-2021, enombhalo kaRon noRussell Mael beSparks, kanye noCarax, okusekelwe esakhiweni sokuqala, umculo, nezingoma zebhendi. Isitezi sigxile kusomahlaya osukumayo (u-Adam Driver) kanye nonkosikazi wakhe womculi we-opera (uMarion Cotillard), nokuthi izimpilo zabo zishintsha kanjani ngemva kokuzalwa kwengane yabo yokuqala. U-Devyn McDowell noSimon Helberg nabo bayinkanyezi.
I-UGC Distribution isabalalise u-Annette e-France ngomhlaka-7 Julayi, 2021, ngemva kosuku ibonakale okokuqala njengesithombe esivula ku-2021 Cannes Film Festival. Abagxeki banikeze ifilimu ukubuyekezwa okuhle.
Usomahlaya ovusa inkanuko uHenry McHenry umemezela ngokukhululekile umshado wakhe nomculi odume umhlaba wonke u-Ann Desfranoux ngemva kobudlelwane obufushane. U-Ann uzala indodakazi yabo u-Annette, odlalwa unodoli owenziwe ngokhuni, ngemva nje kwalokho. Umshado ukhula unezinkinga njengoba uHenry ephoqeleka ukuba anakekele u-Annette njengoba umsebenzi ka-Annette uqala, umthumela ohambweni lomhlaba wonke.
U-Ann unephupho ngabesifazane abayisithupha abeza nezinsolo zokuhlukunyezwa ngaphambilini kukaHenry, okulandelwa iphupho elibi ngoHenry acishe ambulale. Emuva ekhaya, umsebenzi kaHenry uyancipha, uhlanganiswe nokuqubuka kwasesiteji, futhi uqala ukucasukela impumelelo ka-Ann eqhubekayo. U-Ann ugibela esikebheni ngobusuku obunesivunguvungu njengoba uHenry emcindezela ngokudakwa ukuba amyise ku-waltz, futhi bobabili bahlela uhambo oluyimfihlo lokuyolungisa uthando lwabo. Ngemva kokushona kukanina, u-Annette uthola amandla okucula ngezwi likanina, alisebenzisa ukwesabisa uHenry.
UHenry uzithola esenkingeni yezezimali ngaphandle kweholo lika-Ann, kuyilapho esuswa ekusoleni okungokomthetho ngokubulala kwakhe. Uthintana nomphelezeli omdala ka-Annette, eveza izwi lika-Annette eliculayo futhi aphakamise ukuthi basebenzise ithalente lakhe ekuculweni komculo. Umphelezeli wamukela ngokudabuka, njengoba ethandane no-Ann, futhi uMntwana u-Annette uba nomuzwa womhlaba wonke njengoba bevakashela ndawonye.
UHenry, ehlukunyezwa u-Ann, uyaqhubeka ephuza kakhulu futhi uphuma ebusuku. Lapho uHenry ebuyela ekhaya ngobunye ubusuku, uzwa u-Annette ecula iculo elithi, We Love each other So Much, okusobala ukuthi kuyiculo lika-Ann noHenry. Ubhekana nomdlali wopiyano, othi unguyise ka-Annette omzalayo. U-Henry umminzisa echibini elingemuva kwendlu ukuziphindiselela, lokhu u-Annette akubona efasiteleni lekamelo lakhe.
UHenry unomsebenzi owodwa ohlelelwe i-Hyperbowl halftime show, kodwa uyenqaba ukucula futhi esikhundleni salokho umemezela esixukwini, u-Daddy ubulala abantu. UHenry uquliswa icala futhi utholakala enecala.
U-Annette ubona uyise ejele eminyakeni embalwa kamuva, futhi lapho emtshela ukuthi ubukeka ehlukile, akakhulumi ngonodoli ophambi kwakhe, kodwa ukhuluma nengane yangempela emi ngasefasiteleni. U-Annette uyayichitha imizamo yakhe yokubuyisana, aze asole nomama wakhe ngokumkhohlisa ukuze aziphindiselele. UHenry no-Annette bavalelisana okokugcina ngaphambi kokuba ahambe, isiphetho sakhe asiqinisekile. Phansi, unodoli ka-Annette ulahliwe futhi ufile.
U-Leos Carax bekulindeleke ukuthi enze isici sakhe sokuqala solimi lwesiNgisi ngoNovemba 2016, no-Adam Driver, uRooney Mara, kanye noRihanna ezingxoxweni zokuzodlala esithombeni. Ukuqopha bekufanele kuqale entwasahlobo ka-2017.
Ifilimu yathengwa ngabakwa-Amazon Studios ngoMashi 2017, nakuba uMara noRihanna babengasahlanganyeli ekukhiqizweni. UMichelle Williams ulingise indawo kaMara ngoMeyi, kanti ukukhiqizwa kuzoqala ngoJulayi. Ukukhiqizwa kwefilimu kwamiswa, ababhali besikrini uRon noRussell Mael basola ukubambezeleka kwezibopho zomshayeli we-Star Wars. Ukuqopha kuhlehlisiwe kuze kube yihlobo lika-2019.
NgoMeyi 2019, ukukhiqizwa kwefilimu kwaqala kabusha, kwathi uMarion Cotillard wangena esikhundleni sikaWilliams. USimon Helberg ujoyine abalingisi befilimu ngo-Okthoba 2019. Ukuqoshwa kwaqala ngo-Agasti 2019, ezindaweni ezihlanganisa i-Los Angeles, i-Brussels, ne-Bruges, kanye ne-Münster, i-Cologne, ne-Bonn yaseJalimane. Lo msebenzi waphothulwa ngoNovemba walo nyaka. Umculi waseBelgian u-Angèle waqashwa esikhundleni esingamenyezelwanga ngoJanuwari 2020, ngokusho kwemibiko.
U-Annette wenze ifilimu yakhe yokuqala ngoJulayi 6, 2021, eCannes Film Festival futhi UGC Distribution wayishicilela ngalo lolo suku eFrance. Ifilimu ibe nokukhishwa kwetiyetha okulinganiselwe eNyakatho Melika ngo-Agasti 6, 2021, ngaphambi kokuthi ikhishwe ngokwedijithali ku-Amazon Prime Video ngo-Agasti 20, 2021. Amalungelo okusabalalisa ale filimu e-UK nase-Ireland athengwe umhlinzeki wokusakaza u-MUBI ngoJuni 2021. ikhethelwe ingxenye yama-26 ye-Busan International Film Festival's 'Gala Presentation' futhi izokhonjiswa phakathi nefestiveli.
Kuyathakazelisa kwesokudla? Ngiyaqiniseka ukuthi uzizwa ngendlela efanayo, futhi uma ukuthandile ukufunda lesi sihloko, ngingabheja ukuthi ubungathanda nabanye. Ngakho nje ngethemba wethu iwebhusayithi futhi uzothola inqwaba yezindatshana ochungechungeni namamuvi ongathanda ukuwabuka.
Izokhishwa Nini Isizini 2 ERatched?
Amakhasino aku-inthanethi - Ungakuthokozela Kanjani Ukuhoxiswa Kwama-Winnings Ngokushesha?